Momba anay - Shenzhen PUAS Industrial Co., Ltd.
PUASnatsangana tamin'ny taona 2001. izay mpanamboatra maneran-tany an'ny ProAV PTZ & Conferencing AV Camera sy Provider Solution tamin'ny 2001. Mampifandray ny R&D, ny endrika, ny famokarana ary ny varotra izahay. Ny vokarintsika dia ampiasaina be dia be amin'ny Broadcast System, AV Conferencing, Lecture & Education, Telemedicine, Video Live Streaming & Event, Emergency Emergency, Unified komunikasi & Collaboration, Multimedia System.
● PUAS nifantoka tamin'ny fampandrosoana sy fikarohana ara-teknika momba ny fakantsary miloko HD hatramin'ny nanombohany. PUAS dia miantehitra amin'ny tombom-pikarohana fikarohana siantifika mahery vaika, efa nahazo mari-pahaizana an-tsitrapo maro sy fanamarinana momba ny zon'ny mpamorona. Ary manana algorithm fototra tsy miankina sy tombony amin'ny fakantsary HD amin'ny sehatry ny teknika matihanina izy, toy ny fifantohana fiara, fifandanjana fotsy, auto iris, fihenan'ny tabataba 3D sns.
● PUAS miasa foana amin'ny foto-kevitra fiaraha-miasa amin'ny "Trust dia avy amin'ny serasera", mihaino ny filan'ny mpampiasa, manatsara hatrany ny fiasa ny vokatra, ny vokatra ary ny kalitao miaraka amin'ny rafi-panompoana lafo vidy sy kalitao tsara dia tsara, hahazoana ny fahatokisan'ny mpanjifa manerantany sy ny fanohanan'izy ireo.
● PUAS manana fiaraha-miasa misokatra ary manome ny mpanjifa eran-tany amin'ny fomba fiaraha-miasa toy ny masoivoho, OEM ary ODM. Raiso ny fitakian'ny mpanjifa ho mpitari-dalana sy miasa mafy amin'ny fampandrosoana miaraka amin'ny fampiroboroboana ny fampandrosoana ny indostrian'ny indostria.